Njem na Ntụrụndụ Franchises maka ọrịre | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Njem na Ntụrụndụ Franchises
Njikọ Ntụrụndụ na Ntụrụndụ Fụtara
Njem kacha ọhụrụ na Ntụrụndụ Franchises
Njem & Ntụrụndụ Franchises
Site na ngalaba njem na-eto n’ike ụwa niile, na njem na-enyere akụnụba aka ịba ụba, gịnị kpatara na itinye ego na ohere njem na ntụrụndụ? Ọ bụ ya mere taa, anyị ga-edepụta ụfọdụ ọnụ ọgụgụ gburugburu mpaghara njem na oge ntụrụndụ iji nye onye ọ bụla na-eche itinye obere nghọta na mpaghara na-eto ngwa ngwa.
Statistics gburugburu ụlọ ọrụ njem & Ntụrụndụ
Ugbu a, anyị ga-edepụta ụfọdụ stats gburugburu mpaghara njem na oge ntụrụndụ. Yabụ na onye ọ bụla na-achọ itinye ego nwere ike nweta ụdị mmetụta nke ndị ahịa ha nwere ike inweta ga-enweta na ya itinye ego na otu n'ime ohere ndị a na-enye obi ụtọ nwere ike ị nweta. Offọdụ n’ime ọnụ ọgụgụ ndị a nwere ike iju gị anya gbasara etu njem njem na ntụrụndụ buru ibu siri dị ma etu o si enyere akụnụba anyị aka kwa afọ.
Kemgbe afọ 2010, ụlọ ọrụ njem abụrụla ngalaba na-eto ngwa ngwa.
Britain nwere amụma maka inwe ụlọ ọrụ njem ga-eru £ 257 ijeri na 2025.
Gburugburu ụwa, ndị njem 1.8bn bịara maka nlegharị anya na 2018
4.5bn njem zuru ụwa ọnụ na 2018.
Njem nlegharị anya inbound ga-eto site na £ 21 ijeri na 2013 ruo £ 57 ijeri site na 2025.
Industrylọ ọrụ njem na-enye ọtụtụ nde ọrụ n'ụwa niile.
Kedu ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi maka ụlọ ọrụ Njem & Ntụrụndụ?
Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi na mpaghara njem na ntụrụndụ na-eto kwa afọ yana ọnụ ọgụgụ ndị a gosikwara ụdị ntọala ndị ahịa na -efu na ị na-enweta dị egwu. Ọzọkwa njem na ntụrụndụ dị mma na enyere ndị klas ọrụ nkịtị ọrụ na-enye ọtụtụ nde ohere ọrụ kwa afọ gafee ụwa niile. Yabụ na atụ anya na ọnụ ọgụgụ ndị a enyerela gị aka ịmalite ịmalite njem gị na oge ntụrụndụ ma bụrụ onye isi nke gị.
Chọta ezigbo aha njem gị na Franchisee.